China ịkwanyere mmiri ozuzo prrof ákwà, Pee mmiri ozuzo na-egosi ákwà, ụgbọala cover factory na-emepụta | Boda
A na-eji akwa mmiri ozuzo eme ihe iji kpuchie ngwongwo na njem n'ọhịa dịka ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mines. Ọ nwere njirimara nke nkwụsi ike anyanwụ, nguzogide ntu oyi, mgbochi ịka nká, mmebi nke corrosion, ịdị arọ dị mfe, mpịachi na ogologo oge.
Ihe: polypropylene ma ọ bụ polyethylene njupụta: 9 × 9 ka 14 × 14 obosara: 1.65m ka 12m
2X3m, 3X4m, 3x5m, 4x5m, 4x6m, 5x8m, 6x8m, 6x10m, 2.5 × 3.6m, 3.6 × 5.4m, 5.4 × 7.2m, 7.2x9m, 10x50m.
Dabere na mkpa ndị ahịa:
Arọ: 60 ka 360gsm
Ugboro abụọ n'akụkụ waterproof, anọ nkuku otu n'ogige atụrụ ihu okpomọkụ akara; eriri dị n'akụkụ ọnụ maka ọrụ arụnyere, maka ụgbọ ala ezumike, ụgbọala, ụgbọ mmiri, saịtị ewu, nkụ, kamakwa gụnyere gwongworo, ụgbọala na-adọkpụ, akụrụngwa, ala, nnapụta mberede, eserese, wdg. Ngwaahịa ahụ nwere uru nke mmiri na-adịghị, ihe akaebe oyi, sunscreen, mgbochi ịka nká, UV-eguzogide, anwụ ngwa ngwa, mgbali eguzogide, mpịachi-eguzogide, corrosion eguzogide, portability, echekwa na ndị bara uru uru. Ngwaahịa ndị ahụ kwesịrị ekwesị maka nchekwa, ihe owuwu, ụlọikwuu dị iche iche, uwe mkpuchi, ụlọ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ụlọ griin dị iche iche, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ụgbọ elu na ụzọ ndị ọzọ eji ebu ma na-emeghe ngwongwo na-ekpuchi ma na-echebe.
Rainkwanyere waterproof ákwà ngwaahịa iwebata: thickened green tarpaulin, makwaara dị ka ịkwanyere tarpaulin, ntekwasa na elu ike polyester kwaaji, ntekwasa na polyvinyl chloride (ịkwanyere) mado resin, na-agbakwunye ome osooso, ebu ebu inhibitor, mgbochi ịka nká n'ụlọnga, mgbochi static gị n'ụlọnga na ndị ọzọ ihe mgbakwunye kemịkalụ, bụ plasticized na nnukwu okpomọkụ. Site na mmiri na-ekpuchi mmiri, ihe ngosi ebumpụta ụwa, nguzogide oyi, nguzogide ịka nka, mgbochi na ihe ndị ọzọ, enwere ike ịhazi ya na nha na ụdị dị iche iche dị ka mkpa ndị ahịa si dị. Mgbe ị na-arụ ọrụ, a na-ekechi akụkụ anọ nke ákwà akwa, kpuchie akụkụ anọ ya na akụkụ anọ ya, aka niile enweghịkwa ohere
Njirimara nke PVC mmiri ozuzo na akwa maka isi jiri:
1. O nwere ọrụ nke mmiri, mmiri ozuzo, sunscreen, mildew proof, tensile, mpịachi na ihu igwe, ma nwee njirimara nke acid na alkali na-eguzogide, nguzogide dị elu dị elu, ịsa ahụ na mpịachi.
2. Ngwaahịa a kwesịrị izere nkọ nkọ ngwaọrụ eji
Jiri na mmezi ihe ọmụma nke PVC rainproof ákwà:
1. Mgbe eji tarpaulin PVC, ekwesịrị izere ịcha akwa ahụ site na iji ngwaọrụ dị nkọ, nke ga-eduga na nkwụsị nke arụmọrụ mmiri nke akwa ahụ.
2. Mgbe ejiri PVC tarpaulin mee ihe, ekwesịrị imeghe ya, kpoo ya ma tinye ya maka iji ya.
3. Mgbe a na-adọba PVC tarpaulins ma chekwaa, ha kwesịrị ịchebe site na mmiri na òké. Ha kwesiri ka akpoo ha mgbe nile dika iru mmiri na ihu igwe di.
4. N'oge njem nke tarpaulin PVC, ike ahụ kwesịrị ịdị ka o kwere mee iji gbochie ngwugwu mpụga ka ọ ghara imebi na mkpuchi mkpuchi ahụ site n'ike n'ike.
5. A naghị etinye tarpaulin PVC n’ozuzu oke, yabụ a ga-edebe ya n’ọkụ ahụ mgbe ejiri ya, tụmadị mgbe echekwara ya.
6. Mgbe a na-emeghe tarpaulin PVC, ọ dị mkpa iji zere imebi ihe mkpuchi mkpuchi nke ịbịaru n'ala.
7. Tupu akpaaka PVC apụ, ekwesịrị ịlele ala iji wepu ihe ndị dị nkọ iji gbochie mmebi akwa ahụ n'elu akwa mkpuchi.
Ohaneze, a na-eji akwa polypropylene ma ọ bụ polyethylene mee akwa ahụ. Rain ákwà bụ ụdị nke ákwà na mmiri ozuzo àmà arụmọrụ arụmọrụ ọrụ.
BOSENDA na-enye usoro nke akwa mkpuchi mmiri / mmiri na-egosi mmiri na nkọwa zuru ezu, maka nkọwa ndị ọzọ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Ịgbado ọkụ igwe, DC ịgbado ọkụ igwe, AC ịgbado ọkụ igwe, ịgbado ọkụ nkpuchi, ịgbado ọkụ ngwa
Osote: Gbachichie, na-e imomi ọla kọpa mkpọchi, igwe anaghị agba nchara mkpọchi, akwukwo mkpọchi, mgbochi ohi mkpọchi, paswọọdụ mkpọchi, akara mkpisiaka mkpọchi na ndị ọzọ na padlocks
Pe Rain Gosiri Uwe
Pvc Rain Gosiri Uwe
Mmiri ozuzo Uwe Uwe
Ihe mkpuchi ụgbọala
Uwe Mmiri mmiri
Ịgbado ọkụ igwe, DC ịgbado ọkụ igwe, AC ịgbado ọkụ ...
Ighikota malite ịgba, igwe anaghị agba nchara malite ịgba bit, ígwè d ...
Ọdụdọ teepu, combustion na-akwado teepu, PV ...
Craftgbọ elu ụdị oghere hụrụ, woodworking onu hụrụ, a ...
Hot gbazee mama egbe, electric ígwè mama egbe, na-ekpo ọkụ ...
woodworking ala bit set, woodworking broach ...